Baarlamanka Puntland oo ansixiyey miisaaniyada sanadkan ay dowladdu ku howl-gelayso ~ RAYO TV BORAMA
Baarlamanka Puntland oo ansixiyey miisaaniyada sanadkan ay dowladdu ku howl-gelayso
By Ahmed Ciiltire media at 7:21 AM News No comments
Baarlamanka dowladda Puntland ayaa maanta meel-mariyey miisaaniyada sanadka 2014 ee maamulka madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali, kadib dood dheer iyo su’aalo baarlamanku iska weydiiyey meelaha laga sugayo dakhliga iyo habka isticmaalka hay’addaha dowladda.
50 mudane oo baarlamanka ka tirsan ayaa kooramka fadhiyey, waxaana cod gacantaag ah miisaaniyada ku ansixiyey 46 mudane.
Gudoomiyaha baarlamanka Puntland Siciid Xasan shire ayaa ku dhawaaqay go’aanka baarlamanka ee ah ansixinta miisaaniyada, wuxuu sheegay in la saxay khaladaad dhowr ah oo ku jiray miisaaniyada ay soo gudbisay wasaaradda maaliyada.
Xildhibaanada ayaa su’aalo badan ka weydiiyey guddiga maaliyada baarlamanka lacagta loo yaqaan “Curraaraha” taas oo ah isticmaal dheeraad ah oo ay leeyihiin hay’adda dowladda Puntland, isla markaasna qayb ka ah miisaaniyada ilaa 37%.
Miisaaniyada la asnsixiyey ayaa dhan 30.678.192 milyan oo dollar, Maxamed Faarax Nuux oo ah gudoomiyaha guddiga maaliyada baarlamanka ayaa Horseed Media u sheegay in lacagtii hore ee baarlamanka loo soo gudbiyey ay ahayd 3.4 milyan dollar, waxayna ku dhacday khalad qoraal.
Toddobaadkii hore ayaa baarlamanku u fariistay kalfadhi aan caadi ahayn iyagoo fasax ku jiray, waxaana furay kalfadhigaas oo miisaaniyada dowladda ee sanadkan looga hadlayey madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali